::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather सरकार र मेनपावर व्यवसायीको सहमतिप्रति नागरिकको तिब्र आक्रोश:: Rojgar Manch ::
सरकार र मेनपावर व्यवसायीको सहमतिप्रति नागरिकको तिब्र आक्रोश
सोमवार, २०७२ श्रावण ११ गते १७:२१
सरकार र मेनपावर व्यवसायीका बीच हिजो सहमति गरेपछि हिजैबाट मेनपावरका कार्यालयहरु खुले । काम धमाधम अगाडि बढ्यो । तर यी दुई बीच कामदारका सम्बन्धमा वेवास्ता गरिएको भनी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया देखिएका छन् । ती मध्ये केही प्रतिक्रियाहरु ।
नवराज नवोदित फेसबुकमा लेख्छन् ।
मानव तस्करको अखडा बनेका मेनपावर ब्यबसायि हरुको सामुन्ने सरकारले घुँडा टेकेको अनुभुती महसुस हुँदैछ , पहिले 70 हजार लागत भनेर पत्रपत्रिकामा बिज्ञापन छपाई4देखि5लाख सम्म पैसा असुल गर्थे मेनपावर ब्यबसायिले । अहिले आएर सरकार र ब्यबसायी बीच भएको सहमतिले म जस्ता वैदेशिक रोजगारमा गईसकेका र जान चाहने सबैलाई झन अन्योल थपेको महसुस भईरहेको छ ।
मुलुकमा सोचेजस्तो रोजगार नपाएका युवा युवतीहरुको यस्तो जमात छ जो लाखौँ खर्च गरेर भएपनी सुख अनि राम्रो कमाईको आशामा विदेशिन चाहन्छन । बेरोजगार हुनुको पीडा अलग छ तर यही पीडामा शोषण गर्न पल्केका दलालहरुले 10 हजार रुपैयाँ लागतको रसिद काटेर अझैपनि खुलेआम रुपमा लाखौं रुपैयाँ असुली गर्ने प्राय निश्चित छ । सरकारले बेरोजगारहरुको यो पीडा अनि मेनपावर व्यवसायीहरुको यो चातुर्यतालाई बेलैमा नबुझ्ने हो भने स्थिती अझ भयावह हुने प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले चाँडै आफ्नो छुट्टै संयन्त्र बनाएर आफ्ना नागरिकलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउने ब्यबस्था गरि सम्पुर्ण मेनपावर बन्द गरिदिएमा म जस्ता लाखौँ नागरिकहरुको मुहारमा चमक आउने थियो ।
पासपोर्ट बनाउने बेला देखि लुटिन थालेको नेपाली युवा बिदेश आईपुग्दा सम्म लुटिने समस्याको अन्त्य कहिले होला र खै ?
धरम के सी फेसबुकमा लेख्छन् ।
- बैदेशिक रोजगारका महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हामी कामदार पनि हाैं, हामी कामदारहरूका प्रतिनिधि बिना सहमति गरिएको कथित ती ३१ बुंदामा के के छन ? सार्वजनिक गर ।
- कामदारहरूमाथि फेरि पनि यो या त्यो ढंगले शोषण, ठगी या जालझेल गरियो भने त्यो कदापि सैह्य हुनेछैन ।
- अहिले फ्रि भिषा फ्रि टिकटको समर्थनमा ताली बजाउन उठेका हातहरू धोका भएमा भोली बिद्रोहका मुठ्ठी बनी बजारिनेछन ।
ठगी गर्न पाउ भनी गरेको बैदेशिक रोजगार कम्पनिहरुको आन्दोलन्मा सहमती भैसकेछ आब त चोरी गर्न पाउ भनी आन्दोलन गरे पनि भो यहाँ त । गजब छ वा !
ब्लुबुक नबिकरण पनि दलालमार्फत गरे काम छिटो हुने देशमा 'बैदेशिक रोजगार' पनि दलाल बिना कठीन नै छ !
श्रीमानलाइ बैदेशिक रोजगार जान निशुल्क रे अनि श्रीमतिलाइ चैं नेपालमा गर्भपतन गर्न निशुल्क रे! त्यसका बाजे,म त सरकारकै नियातमा खोट देख्दैछु ।